के लार्सन सी पग्लिन अस्थिरताको कारण छ? | नेटवर्क मौसम विज्ञान
के लार्सन सी पग्लिन अस्थिरताको कारण छ?
त्यहाँ धेरै अध्ययनहरू छन् जुन प्रभाव र परिणामहरू पत्ता लगाउन खोज्छन् कि पिग्लिनले मौसम र हाम्रो ग्रहको स्थिरतामा पारेको छ। उपग्रहहरूका लागि धन्यबाद हामी हिंड्न र हिमनदीको आकारमा भिन्नता जान्न सक्छौं। हालसालै इतिहासमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो हिमशिला अन्टार्कटिक शेल्फबाट यसको अलग्गै पछाडि "जन्म" भएको छ।
अन्टार्कटिकामा लार्सन सी अवरोधको क्लीभेज यसले वैज्ञानिकहरूलाई प्लेटफर्मको स्थिरताको बारेमा बढी सिक्ने अवसर प्रदान गरेको छ। के पिग्लिएकोले अस्थिरताको कारण हो?
अन्टार्कटिकामा जारी हिमशिलाको आकार लक्जमबर्गको भन्दा दोब्बर छ। त्यस पछि, यो विशाल ट्यूबलर हिमशृंग, A68, यो अवरोधबाट लगभग km किमि टाढा सारिरहेको छ। उपग्रहहरूले प्रदान गरेको छविहरूले लगभग ११ साना आइसबर्गहरूको समूहको गठन देखाउँदछ।
अहिले अन्टार्कटिकामा यो जाडो छ र सायद यसमा केही उज्यालो छैन। दिनका घण्टा दुर्लभ छ, त्यसैले A68 आइसबर्गको विकासको अध्ययन गर्न, इन्फ्रारेड दर्शन उपग्रहहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
लार्सन सी टुकड़ीले अन्टार्कटिक शेल्फको बाँकी भागमा अस्थिरता पैदा गरिरहेको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन प्रयास भइरहेको छ। साथै यो A68 हिमशिलाको स्थिरता बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ किनकी यो संकुचित हुन्छ र बग्दछ।
“यदि बरफको शेल्फले उन्नयनको साथ सम्पर्क हरायो भने या त निरन्तर पातलो र कलई .्गबाट, यसले बरफको गतिमा महत्वपूर्ण गति बढाउन सक्छ र सम्भावित रूपमा अझ अस्थिर हुन सक्छ। यस्तो देखिन्छ कि लार्सन सीको कथा अझै सकिएको छैन ", डा। होगले पत्रिकामा प्रकाशित एक अध्ययनमा व्याख्या गरे। प्रकृति मौसम परिवर्तन।
आइस शेल्फको पग्लने क्रममा समुद्रको सतहमा महत्त्वेपूर्ण वृद्धि हुनसक्दैन किनभने हिमबर्गले ओगटेको यसकै मात्रामा पानीले प्रतिस्थापन गर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » के लार्सन सी पग्लिन अस्थिरताको कारण छ?
जुलाई २०१,, नयाँ ग्लोबल औसत तापमान रेकर्ड
भूत वन, ग्रह को नयाँ परिदृश्य